Xildhibaanada Beesha Absame iyo Madaxweyne Farmaajo oo kulan wada qaatey • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Xildhibaanada Beesha Absame iyo Madaxweyne Farmaajo oo kulan wada qaatey
Xildhibaanada Beesha Absame iyo Madaxweyne Farmaajo oo kulan wada qaatey
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaaliga ah Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa habeenkii xalay casho u sameeyey xildhibaanada ka soo jeeda Beesha Absame ee labada aqal ee Soomaaliya.
Kulankan ayaa ku saabsanaa cabasho Xildhibaanadu ka muujiyeen go’aankii xukuumaddu soo saartey ee la xiriirey Cabdikariim Qalbidhagax iyo weliba Jamhadda ONLF iyo aayaha gobolka DDS ee Itoobiya hoostaga.
Xildhibaanada ayaa sheegaya in go’aamadaasi ay leeyihiin cawaaqib xumo xitaa iyaga saameyneysa.
Mid kamid ah Xildhibaanada ayaa Horseed u sheegay in kulankii Sabtidiii la baajiyey uu salka ku hayey in marka hore la xaliyo tabashada Xildhibaanada beesha Absame ka hor inta aan fadhigu furmin.
Kulanka xalay u dhexeeyey Xildhibaanada iyo Madaxweynahaa ayaa la isku afgartey wax badan, waxaana loo saarey guddi go’aan ka gaara xalna keena, sii loo baajiyo in khilaafkan uu saameyn ku yeesho Dowladda dhexdeeda.
Go’aanka xukuumadda ayaa mugdi gelinaya cidda noqon karta Soomaali u dhashey Soomaaliya, iyada oo aan waxba laga beddelin dastuurkii aftida lagu ansixiyey kadib xornimadii Soomaaliya 1960, marka la eego Siyaasiyiin badan oo Dowladda xilal ka haya, oo ku dhashey deegaanada ismaamulka Soomaalida ee Itoobiya, horeyna xilal uga soo qabtey halkaas, sida Xeer ilaaliyaha guud ee Soomaaliya, Raysalwasaare ku-xigeenka Soomaaliya iyo qaar kale oo badan, waxaana ugu danbeeyey Cabdikariim Sheekh Muuse oo ahaa muwaadin Soomaaliyeed loo gacan geliyey maamulka Adis ababa ee raadinaayey.